Myanmar Dictionary :: forefathers
(adj) အခွန် စသည်တို့ကို စည်းကြပ်နိုင်သော။
(noun) တူရိယာ။ ဂီတ သံစဉ် သင်္ကေတ။
(adj) ကာမပိုင်ခင်ပွန်းတစ်ယောက်တည်းထားရှိသော။ တစ်ပွင်းတည်းပွင့်သော။
(noun) reprobation ဆိုနိုင်ခက်သည်ဟု ပစ်ထားခြင်း။ ထာဝစဉ် ပျက်စီးဆိုးသွမ်းနေခြင်း။
(v.t) စက်ဆုပ်စွာပြစ်တင်သည်။ ငြင်းပယ်သည်။ ချမ်းသာမပေးဘဲအပြစ်စီရင်သည်။
(v.t) ပြန်လာသည်။ ပြန်၍ကွေးညွတ်သည်။ ခွန်းတုံ့ပြန်၍ ပြောသည်။ ပြန်လည်ချေပသည်။
(v.i) ထိုင်စေသည်။ ထားသည်။ ဆုံးဖြတ်သည်။ အတည်တကျဖြစ်စေသည်။ ဝင်သည်။ ကွယ်သည်။ မြဲအောင်ဆက်သည်။ to set about ပျံ့နှံ့စေသည်။ to set apart ချန်လှပ်ထားသည်။ to set fire မီးတိုက်သည်။ to set in order ကျကျနနဖြစ်အောင်လုပ်သည်။
(v.t) ထိုင်စေသည်။ ထားသည်။ ဆုံးဖြတ်သည်။ အတည်တကျဖြစ်စေသည်။ ဝင်သည်။ ကွယ်သည်။ မြဲအောင်ဆက်သည်။ to set about ပျံ့နှံ့စေသည်။ to set apart ချန်လှပ်ထားသည်။ to set fire မီးတိုက်သည်။ to set in order ကျကျနနဖြစ်အောင်လုပ်သည်။
(adj) မပြောင်းလဲသော။ ခိုင်မြဲသော။ သတ်မှတ်ထားသော။
Myanmar Dictionary is free for Myanmar People. Over 36,000 words contains in database. It is light weight and easy to use. 100 countries from 200,000 Myanmar people are using it for learning English. You want to use English to Myanmar Dictionary offline, you can download it from following link.
Myanmar Ads | Where Is Myanmar| Myanmar IT | Burma Myanmar | Myanmar Dictionary | Shwe